Khilaafka Soomaaliya iyo Kenya oo waji kale yeeshay – Radio Damal
Khilaafka Soomaaliya iyo Kenya oo waji kale yeeshay
Urur Goboleedka IGAD ayaa sheegay in 20-ka Bishan Diiseembar uu shir ku qaban doono dalka Djibouti, balse faah-faahin dheeraad ah kama aysan bixin inkastoo Soomaaliya ay sheegtay in shirkaasi Jabuuti looga arrinsanayo xiriirka dibloomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya.
Hadalkan ayaa yimid kaddib markii Soomaaliya ay warqad cabasho ah oo ka dhan ah Kenya u gudbisay Ra’iisul Wasaaraha Suudaan Cabdalla Xamduuk, ahna Guddoomiyaha Urur Goboleedka IGAD. Soomaaliya ayaa dhawaan Kenya ku eedeysay inay faragelin ku hayso arrimaha Soomaaliya.
Xoghayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Fedaraalka Soomaaliya Maxamed Cali Nuur oo ka hadlay warbaahinta dawladda ayaa sheegay in Soomaaliya ay dib ugu yeeratay safiirkeeda Kenya danjire Maxamuud Axmed Nuur Tarsan, waxaana ay safiirka Kenya danjire Lucas Tumbo ku wargalisay in uu dalkiisa wadatashi ugu laabto.
Dawladda Federaalka Soomaaliya waxay Kenya ku eedeysay inay madaxweynaha Jubbaland ku cadaadinayso inuu fuliyo ajandaheeda siyaasadeed, taas oo carqaladaynaysa heshiiskii siyaasadeed ee doorashada Soomaaliya, islamarkaana ka hor imaanaysa hab dhaqanka diblomaasiyadeed ee dawladaha dariska ah.
Muxuu xiriirka sii xumaanaya ee Kenya iyo Somaaliya ku soo kordhin karaa shirka Jabuuti ee IGAD?
Xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa sannadadii dambe sii xumaanayay iyadoo Somaaliya ay ku andacooneyso in Kenya ay faro gelin ba’an ku hayso arrimaha Soomaaliya taasi oo ay sheegtay iney su’aal gelineyso madaxbanaanida Soomaaliya.
Jibril Aw Maxamed oo arimaha Afrika ka dhiga Jaamacadda Ohio ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in tallaabadan labaad ay Soomaaliya qaadday ay muujineyso in Kenya aysan waxba ka qaban cabashada Soomaaliya ee farogelinta Kenya ay ku hayso gudaha Soomaaliya gaar ahaan Jubbaland.
Marka la eego xiriirka caalamiga ah ma la dhihi karaa Soomaaliya waxay martay waddadii saxda ahayd?
Jibriil oo Su’aashaasi ka jawaabaya ayaa sheegay in tallabada koobaad ay ahayd in labada dal ay ka wada xaalaan khilaafka u dhaxeeya oo ay soo celiyaan safiiradadooda halka tallaabada labaad ay ahayd in arrinta lagu xalliyo fadhi kaas ka ballaaran oo gobolka ah sida IGAD.
“Haddii kulanka IGAD wax looga qaban waayo cabashada ay Soomaaliya tabaneyso, waxaa Soomaaliya u furun in ay heerarka kale usii gudbiso sida Midowga Afrika iyo Qarmada Midobay.” ayuu yiri barafsoor Jibriil.
Halkuu ayuu ku dambeyn doontaa khilaafka Soomaaliya iyo Kenya?
Jibriil ayaa sheegay in dalalka ay is rixaan lakiin labadan dal ay daris yihiin ayna ka dhaxeeyaan dano badan iyadoo Soomaaliya iyo Kenyaba ay ku nool yihiin shacab u kala dhashay labada dal.
“labada dal ma kala maarmi doonaan oo suurogal ma ahan iney kala go’aan, waxayna ila tahay in culeyska haatan jiro uu ka yimid Soomaaliya oo haatan dowladnimadeeda soo noqoneyso oo u adkeysan la’ farogelinta shisheeya gaar ahaan dalalka dariska la ah marka Kenya waxaa u dhadhami la in Soomaaliya ay tiraahdo naga daaya farogelinta iyo dhibaatada.”
“Hase yeeshee ugu dambeyn arrintaan xal ayaa laga gaari doonaa wayna heshiin doonaan Soomaaliya iyo Kenya laakin waxay mari doontaa waddo dheer iyo geeddi socod arrintaasi lagu gaarayo xalkeeda.”
Dabayaaqadii bishii lasoo dhaafay ee November waxaa mar kale soo cusboonaaday xiisadda diblomaasiyadeed ee u dhaxeysa Soomaaliya iyo Kenya kaddib markii ay dowladda federaalka ee fadhigeedu yahay Muqdisho ku eedeysay dhiggeeda Kenya in aysan u qaddarineynin sida dal la siman oo kale.
Xurgufta labada waddan ee soo socotay waxay kasoo billaabatay murankii xadka badda ee sannadihii lasoo dhaafay cirka isku shareerayay, walina kiiskiisa uu hor yaallo maxkamadda caalamiga ah ee caddaaladda.
Laakiin arrimaha xiisadda hadda cusbooneysiiyay waxaa ka mid ah eedeynta ay dowladda Federaalka Soomaaliya ugu jeedisay Kenya inay taageerto maamulka Jubbaland, iyadoo la ogyahay in uu khilaaf siyaasadeed oo muddo dheer soo jiitamayay uu ka dhaxeeyo madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedkaas.
Qodobbada kale ee ku gadaaman xasaradda labada dal ee dariska ah waa in Soomaaliya ay xayirtay ganacsigii qaadka ee ay Kenya u dhoofin jirtay Soomaaliya, kaasoo xukuumadda Nairobi uu uga soo xaroon jiray dhaqaale xoog leh.